China FOTON C10 / C12 fekitori uye vagadziri | Foton
Kurambidza Kurema 12T
Passenger / Seating Kugona 92 / 24-46
Urongwa hwePasi Kupinda-pasi / Pasi-pasi / Matanho maviri
Kugadziridza kwemukova Maviri mu-swing mapapiro maviri emapapiro
Iyi nhepfenyuro inowirirana neinjini dzinosangana neECO II yakajairwa kune EURO V standard;
Diesel / NG injini zviripo
Iyi nhepfenyuro inowirirana kutapurirana kwakasiyana-siyana kubva pachinyorwa kutapurirana kuenda kune otomatiki kutapurirana;
Kusanganisira ZF AllisionVoith Diwa kufambisa.
Muna 2017, Foton AUV yakaendesa 1000 yakachena simba bhazi kuYangon bhazi kambani muMyanmar, ichiita yakakura kuraira muChina bhizimusi bhazi.
Mabhazi eFoton anoenda kuburikidza nekuonekwa kwakasimba kwemotokari uye rollover bvunzo pamusoro pezviuru zana zvemakiromita mune mamiriro emhando dzakasiyana dzemigwagwa uye pasi pemamiriro ekunze akaomesesa senge kupisa kwakanyanya, tembiricha yakaderera uye kumanikidza kwakaderera.